မြန်မာမုန့်စုံစုံလင်လင်ရတဲ့နေရာများ - ဒိုးမယျ
မွနျမာမှနျရငျ မွနျမာ့ရိုးရာမုနျ့ စားဖူးရပါ့မယျ။ မွနျမာ့ရိုးရာမုနျ့တှကေလညျး တဈခါတဈလမှော လုပျစားရတာ ပငျြးစရာ ကောငျးလှပါတယျ။ မုနျ့တှကေလညျး လကျဝငျတာတှရှေိပါတယျ။ အဲ့ဒီ့တော့ ဒီတဈခေါကျမှာ ဘယျနရောတှမှော မွနျမာမုနျ့စုံစုံလငျလငျ ရမလညျးဆိုတာကို ပွောပွပေးလိုကျမယျနျော။
ရနျကငျးကွားမှတျတိုငျ မရောကျခငျနားက တငျ့တငျ့မှာ မွနျမာမုနျ့တှေ စုံလငျနအေောငျရပါတယျ။ စြေးလေးကတော့ နညျးနညျးလေးကွီးပါတယျ။
ရတနာလမျး တောငျဥက်ကလာမွို့နယျမှာ ရှိတဲ့ ရတနာစြေးအတှငျး မှာမွနျမာမုနျ့သညျ တဈသညျရှိပါတယျ ။မုနျ့ကွပျတျိုကျ ကအစရပါတယျ။ စြေးထဲတော့ နညျးနညျးလေးဝငျရပါတယျ။
ရနျကငျးမိုးကောငျးထိပျ ကကားမှတျတိုငျနားမှာလညျး လမျးဘေးမှာရောငျးတဲ့ မွနျမာမုနျ့ဆိုငျလေးရှိပါတယျ ။ ထမနဲလို ရာသီစာတောငျမှသူ့မှာ ၁၂ရာသီ စလုံးရပါတယျ။
၄. Ocean Super Center
Ocean Super Centerတှေ အတှငျးမှာရှိတဲ့ အစားအသောကျတနျးတှမှော မွနျမာမုနျ့ တျောတျောမြားမြားရပါတယျ။ လုပျရကိုငျရတာ တျောတျောလေး မလှယျတဲ့ မုနျ့တှတေောငျရပါတယျ။
ဒီတဈျခါနညျးနညျးလေး ဝေးသှားတယျမထငျပါနဲ့။ စာရေးသူဆိုရငျ ဘကျကျဈကားစီးပွီး ငတျကွီးကလြရှေိ့ပါတယျ။ သနျလငျြစြေးခြိူ အတှငျးထဲက မွနျမာမုနျ့ဆိုငျတှမှောမှ ထနျးသီးမုနျ့က ပိုပွီး အရသာရှိ လကျဆတျနလေို့ပါပဲ။
၆. ပါဒကွီးဘုရားရှကေ့ အဖှားလေးဆိုငျ
သနျလငျြ မွို့ ပါဒကွီးဘုရားအရှေ့ မှာ အဖှားအိုတဈယောကျ အမွဲတမျး မွနျမာမုနျ့ရောငျးနတောကိုတှရေ့မှာပါ။ အရမျးလညျးစုံလငျတဲ့ အပွငျ သုံးတဲ့ အရာတှကေလညျး သဘာဝတှပေါ။ ဘာရောငျးရောငျး ဖကျအိပျနဲ့ ထုပျပေးတာပါ။
မွနျမာမုနျ့တှကေတော့ စာရေးသူသိသလောကျ လကျကမျးမီသလောကျ ပွောပွပေးထားပါတယျ။
မြန်မာမှန်ရင် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့် စားဖူးရပါ့မယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်တွေကလည်း တစ်ခါတစ်လေမှာ လုပ်စားရတာ ပျင်းစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ မုန့်တွေကလည်း လက်ဝင်တာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ဘယ်နေရာတွေမှာ မြန်မာမုန့်စုံစုံလင်လင် ရမလည်းဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်မယ်နော်။
ရန်ကင်းကြားမှတ်တိုင် မရောက်ခင်နားက တင့်တင့်မှာ မြန်မာမုန့်တွေ စုံလင်နေအောင်ရပါတယ်။ ဈေးလေးကတော့ နည်းနည်းလေးကြီးပါတယ်။
ရတနာလမ်း တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ရတနာဈေးအတွင်း မှာမြန်မာမုန့်သည် တစ်သည်ရှိပါတယ် ။မုန့်ကြပ်တိုက် ကအစရပါတယ်။ ဈေးထဲတော့ နည်းနည်းလေးဝင်ရပါတယ်။
ရန်ကင်းမိုးကောင်းထိပ် ကကားမှတ်တိုင်နားမှာလည်း လမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့ မြန်မာမုန့်ဆိုင်လေးရှိပါတယ် ။ ထမနဲလို ရာသီစာတောင်မှသူ့မှာ ၁၂ရာသီ စလုံးရပါတယ်။
Ocean Super Centerတွေ အတွင်းမှာရှိတဲ့ အစားအသောက်တန်းတွေမှာ မြန်မာမုန့် တော်တော်များများရပါတယ်။ လုပ်ရကိုင်ရတာ တော်တော်လေး မလွယ်တဲ့ မုန့်တွေတောင်ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါနည်းနည်းလေး ဝေးသွားတယ်မထင်ပါနဲ့။ စာရေးသူဆိုရင် ဘက်က်စ်ကားစီးပြီး ငတ်ကြီးကျလေ့ရှိပါတယ်။ သန်လျင်ဈေးချိူ အတွင်းထဲက မြန်မာမုန့်ဆိုင်တွေမှာမှ ထန်းသီးမုန့်က ပိုပြီး အရသာရှိ လက်ဆတ်နေလို့ပါပဲ။
၆. ပါဒကြီးဘုရားရှေ့က အဖွားလေးဆိုင်
သန်လျင် မြို့ ပါဒကြီးဘုရားအရှေ့ မှာ အဖွားအိုတစ်ယောက် အမြဲတမ်း မြန်မာမုန့်ရောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အရမ်းလည်းစုံလင်တဲ့ အပြင် သုံးတဲ့ အရာတွေကလည်း သဘာဝတွေပါ။ ဘာရောင်းရောင်း ဖက်အိတ်နဲ့ ထုပ်ပေးတာပါ။
မြန်မာမုန့်တွေကတော့ စာရေးသူသိသလောက် လက်ကမ်းမီသလောက် ပြောပြပေးထားပါတယ်။